Semalt को समर्पित SEO ड्यासबोर्डको साथ SEO Соmpmission विश्लेषण
Semalt को समर्पित SEO ड्यासबोर्डको साथ SEO Ð¡Ð¾mpmission विश्लेषण
स्थिति पृष्ठहरूको स्थितिमा प्रतिस्पर्धा विश्लेषण लक्ष्यहरू सेट गर्न र एसईओ रणनीति सिर्जना गर्न आवश्यक छ। प्रतिस्पर्धीहरूको सामर्थ्य र कमजोरीहरू जाने बिना, राम्रो प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्न मात्र होइन तर मार्केटिंग गतिविधिहरूको विशिष्ट चरणहरूमा निर्णय लिन पनि गाह्रो छ, यसमा समावेश भएको बढ्दो दृश्यता। गुगलमा उही उद्योगबाट कम्पनीहरूको स्थिति प्रमाणीकरण गर्दै, उनीहरूले प्रयोग गर्ने कुञ्जी वाक्यांशहरू र स्थिति विधिहरू एसईओ अडिटका साथ जोड्नुपर्ने आधार हो। यसले तपाइँलाई प्रतिस्पर्धासँग तुलना गर्न अनुमति दिन्छ, सुधारको आवश्यक पर्ने तत्वहरूको बारेमा सिक्नुहोस्। कसरी प्रतिस्पर्धा विश्लेषण प्रदर्शन गर्न यसलाई आधार बनाउन एक प्रभावी स्थिति रणनीति ? प्रभावकारी एसईओ प्रतिस्पर्धा विश्लेषण प्रदर्शन गर्न कुन उपकरणहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ? पाठ पढ्नुहोस् र फेला पार्नुहोस्!
प्रतिस्पर्धा विश्लेषण किन गरिन्छ?
एसईओ प्रतिस्पर्धा विश्लेषणले तपाईंलाई कुन मुख्य वाक्यांश उही उद्योगका अन्य कम्पनीहरूले आफैंमा अवस्थित गराउँछ र उनीहरूको गतिविधिहरूको मार्फत कुन दृश्यता पाउँछन् भनेर प्रमाणित गर्न अनुमति दिन्छ। प्रतिस्पर्धाले स्थितिमा के के गल्ती गर्छ भनेर प्रमाणित गर्न सम्भव छ र तपाईं अन्य ब्राण्डहरूको अगाडि रहन स्थितिको सुरूवातबाट उनीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ कसरी एक प्रतिस्पर्धी विश्लेषण प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर फेला पार्नुहोस्।
प्रतिस्पर्धाको विश्लेषण गर्दा कुन उपकरणहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ?
नि: शुल्क गुगल उपकरणहरूले तपाइँलाई तपाइँको वेबसाइट मात्र विश्लेषण गर्न अनुमति दिनेछ, तसर्थ भुक्तान उपकरणहरू प्रयोग गर्नु आवश्यक हुनेछ जुन तपाइँ तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूका वेबसाइटहरूको अनुसन्धान गर्न अनुमति दिनेछ। आज बजार मा एक उत्तम प्रतिस्पर्धी विश्लेषण उपकरण हो समर्पित SEO ड्यासबोर्ड (DSD) Semalt को। पत्ता लगाउनुहोस् कि कसरी DSD तपाइँको व्यवसाय को लागी काम गर्दछ:
तपाईंको आफ्नै व्यावसायिक वेब एनालिटिक्स प्लेटफर्म चलाएर, तपाईं आफ्नो ब्रान्डको अधिकार बढाउन सक्नुहुनेछ।
तपाइँको ब्रान्ड नाम अन्तर्गत नि: शुल्क SEO उपकरणहरू ग्राहक वफादारी सुधार।
SEO ड्यासबोर्डले तपाइँको वेबसाइटमा नयाँ लीडहरू आकर्षित गर्न र ग्राहकहरूमा परिवर्तन गर्न मद्दत गर्दछ।
DSD तपाइँको सेवाहरु को लागी अनुरोध पठाउन तपाइँको नेतृत्व प्रोत्साहित गर्दछ।
यदि तपाइँ Semalt पुनर्विक्रेता प्रोग्राम पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाइँको एसईओ ड्यासबोर्ड तपाइँ तपाइँको बिक्री र राजस्व बढाउन मद्दत गर्दछ।
Semalt पुनर्विक्रेता कार्यक्रम
कृपया नोट गर्नुहोस्: समर्पित SEO ड्यासबोर्ड सबैको लागि निःशुल्क हो। तपाईं आफ्नो समर्पित SEO ड्यासबोर्डमा पहुँचको लागि आफ्ना ग्राहकहरूलाई चार्ज गर्न सक्नुहुन्न। DSD तपाइँलाई तपाइँको सेवाहरू बेच्न मद्दत गर्न डिजाइन गरिएको छ।
समर्पित SEO ड्यासबोर्ड: प्रतिस्पर्धाको चरण-देखि-चरण विश्लेषण
धेरै सुरु मा, एक SEO अडिट तपाईंको आफ्नै वेबसाइटको DSD को साथ प्रदर्शन गरिएको छ, धन्यवाद जुन तपाईं पछि यो प्रतिस्पर्धीहरूका वेबसाइटहरूसँग तुलना गर्न सक्नुहुन्छ, र केही महिनाका लागि गतिविधि योजना। समर्पित एसईओ ड्यासबोर्डले तपाईंलाई पोजिशनिंगको लागि बजेट अनुमान गर्न र कुन वाक्यांशहरू लाभदायक छन् र कुन अर्डरमा यो कुञ्जी शब्दहरूको लागि दृश्यता निर्माण गर्न लायक छ भन्ने निर्धारण गर्न अनुमति दिन्छ।
समर्पित SEO ड्यासबोर्ड: तपाइँको प्रतिस्पर्धा को हो?
Semalt संग विश्लेषण अघि समर्पित SEO ड्यासबोर्ड, प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा निर्धारित छ। उही उद्योगको ब्रान्डहरू तुलना गरिन्छ जुन सीधा प्रतिद्वन्द्वी हुन्। प्रमाणिकरणको बखत, दुबै कम्पनीहरू जसले आफूलाई सामान्य शब्दहरू, लामो पुच्छर, तर प्रभावकारी स्थानीय पोजीशनमा राम्रोसँग राख्छन्, ध्यानमा राखिन्छन्।
सँग प्रतिस्पर्धा रुजु गर्दा DSD, यो ब्रान्डलाई छोडेर लायक छ जुन व्यावसाय सर्तमा वास्तविक छैन - यी प्रायः उद्योग पोर्टल हुनेछन्। यसका साथै प्रतिस्पर्धा पनि व्यवसायको आकार अनुसार रुजु गरिनु पर्दछ। यदि तपाईं सँग सानो व्यापार छ भने, यो धेरै पटक ठूलो बजेटको साथ एक विशाल वाक्यांशको साथ दिइएको वाक्यांशको लागि समग्र स्थितिको लागि लडाई गर्न लाभदायक हुनेछैन। एसईओ प्रतिस्पर्धा विश्लेषणका लागि ब्रान्डहरू छान्ने प्रक्रियाले लामो समय लिन्छ, तर यो कार्यको सही प्रदर्शनले वास्तविक प्रतिस्पर्धीहरू भेट्टाउन ग्यारेन्टी गर्दछ।
समर्पित एसईओ ड्यासबोर्ड: तपाइँको प्रतिस्पर्धी स्थिति कसरी छ?
प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको सूची सिर्जना पछि, तपाईंले उनीहरूको साइटहरूको स्थिति डाटाको अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यो गर्नका लागि, तपाईं एक "व्यापक वेब एनालिटिक्स र SEO अडिट" प्लेटफर्म प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको डोमेनमा शून्य लागतमा चलाउन सकिन्छ। DSD ले तपाईंलाई सबै भन्दा बढि महत्त्वपूर्ण सूचकहरू जाँच गर्न अनुमति दिनेछ। को समर्पित SEO ड्यासबोर्ड तपाईंलाई एक सूची सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ जुन सब भन्दा महत्त्वपूर्ण डाटा तुलना गरिनेछ।
यो वेबसाइट ट्राफिक विश्लेषण गर्न लायक छ, आगमन लिंक को संख्या को साथै तिनीहरूको DR प्रोफाइल। एउटा महत्त्वपूर्ण चरण भनेको लिंकहरूको स्रोतहरूको विश्लेषण गर्नु हो जुन तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूको साइटहरूमा लैजान्छ, साथै तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूको लिंक निर्माण समयसँग कसरी परिवर्तन हुन्छ।
समर्पित SEO ड्यासबोर्डसँग तुलना गर्न लायक के हो?
धेरै तत्वहरू एसईओ गतिविधिका आधार हुन्। त्यसोभए ती प्रतिस्पर्धा र आफ्नो वेबसाइट बीचमा तुलना गरौं। यसका लागि धन्यबाद, तपाई किन अन्य कम्पनीहरूसँग राम्रो खोज इञ्जिन दर्जा छ भन्ने बारे जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। मेटा विवरणहरू जाँच गर्नुहोस् र उनीहरू कसरी प्रतिस्पर्धाद्वारा निर्मित छन् तुलना गर्नुहोस्। हुनसक्छ यससँग अझ राम्रो कल टु एक्शन छ वा मुख्य वाक्यांशहरू अधिक व्यावसायिक रूपमा प्रवेश गर्दछ? पनि, तुलना गर्नुहोस् पृष्ठहरूको लोड गति कम्प्युटर र मोबाइल उपकरणहरूमा, र जाँच गर्नुहोस् कि यदि तपाईंको प्रतिस्पर्धी वेबसाइटहरू मोबाइल उपकरणहरूमा अनुकूलित छ।
सबै भन्दा पहिले, प्रतिस्पर्धी वेबसाइटहरू तुलना गर्नुहोस् जुन खोज परिणामहरूमा उच्च स्थानमा छन् विशेष गरी तपाईको ख्याल राख्ने किवर्डहरूको लागि। ध्यानपूर्वक पृष्ठहरू जाँच गर्नुहोस् जुन महत्त्वपूर्ण वाक्यांशहरूको लागि तपाईंको ब्रान्ड भन्दा एक वा दुई स्थानहरू उच्च श्रेणीकरण गर्दछ। दुबै उच्च-अर्डर हेडरहरू (H1, H2) र तल्लोसँग तुलना गर्नुहोस्। प्रतिस्पर्धा कसरी तिनीहरूलाई मा वाक्यांश बुनाई र तिनीहरूले के तत्वहरु को उपयोग कसरी जाँच गर्नुहोस्। साथै पाठहरू, यूआरएलहरूको लम्बाईसँग तुलना गर्नुहोस्, साथै प्रतिस्पर्धीहरूका वेबसाइटहरूमा नेभिगेसन कस्तो देखिन्छ।
कुन कुरामा ध्यान दिनु उपयुक्त छ? माथि सूचीबद्ध आधारभूत तत्वहरू प्रमाणीकरण गरेपछि प्रतिस्पर्धीहरूका वेबसाइटहरूमा के हुन्छ भन्ने विश्लेषणमा ध्यान केन्द्रित गर्न लायकको छ। सामग्री विश्लेषण र उनीहरूलाई के सम्बोधन गरिएको हो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै, तिनीहरू उच्च गुणस्तरका छन् कि छैनन्, कसरी सिर्जना हुन्छन् र तिनीहरू स्वेच्छाले टिप्पणी गरिन्छ कि गर्दैनन्, धेरै निष्कर्ष निकाल्ने छ। त्यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर दिँदा तपाईं यसलाई सजिलैसँग तपाईंको आफ्नै सामग्री रणनीतिसँग तुलना गर्न र परिवर्तनहरू प्रस्तुत गर्न अनुमति दिनेछ जसले तपाईंलाई अनुमति दिन्छ तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा उच्च हुन। एसईओ प्राय: प्रतियोगिता पनि ब्ल्याक ह्याट एसईओ विधिहरू प्रयोग गर्दछ कि भनेर प्रमाणित गर्दछ। यो उद्योगले Google ले सिफारिस नगरेका प्रविधिहरू प्रयोग गर्दछ भनेर जान्दै तपाइँलाई विश्वास दिलाउँदछ कि ढिलो वा चाँडो त्यस्ता साइटहरूलाई दण्डित गरिनेछ।
DSD मा प्रतियोगिता को विश्लेषण
DSD ले तपाईंलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्यारामिटरहरूको सर्तमा प्रतिस्पर्धा विश्लेषण तयार गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईंले तुलना गर्नु अघि, तथापि, तपाईंले आफ्नो प्रतिस्पर्धा फेला पार्न र निर्दिष्ट गर्न आवश्यक छ। तपाईंले खोज परिणामहरूको बीचबाट टाढा खेल्न चाहनुहुने साइटहरू फेला पारेपछि, तपाईं विश्लेषण सुरू गर्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि धन्यबाद, तपाईले साझा र विभिन्न कुञ्जी शव्दहरू अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् तपाईले प्रयोग गर्नुहुने वाक्यांश परिभाषित गर्नुहुन्छ र प्रतिस्पर्धाले गर्दैन। यसका साथै तपाई वाक्यांशहरूबारे पनि सिक्नुहुनेछ जुन हराइरहेको छ तपाईको वेबसाइट पोजीशन गर्ने बेलामा र जाँच गर्नुहोस् समर्पित SEO ड्यासबोर्ड यदि तपाईसँग छ भने कुञ्जी शब्दहरू त्यो तपाइँ र प्रतिस्पर्धा जडान।
मुख्य वाक्यांशहरू तुलना गरे पछि, तपाईं तिनीहरूको कठिनाइ प्रमाणित गर्न सक्नुहुनेछ, साथै हेर्नुहोस् कि उच्च गुगलका स्थानहरूबाट अन्य वेबसाइटहरूले यी वाक्यांशहरूलाई पोजिशनिंगको लागि कसरी प्रयोग गर्छन्। यस्तो विश्लेषणको लागि धन्यवाद, तपाईं विशिष्ट उप-पृष्ठहरू तुलना गर्न सक्नुहुन्छ र उनीहरूलाई एसईओ अप्टिमाइजेसनको सर्तमा मात्र प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्न तर वेबसाइट र यूएक्सको सौन्दर्यतासँग सम्बन्धित पक्षहरू पनि प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ। निश्चित गर्नुहोस् लिंक विश्लेषण गुगलमा तपाईंको स्थिति निर्माण गर्दा अफ-साइट गतिविधिहरू पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
कमजोरीहरू जुन शोषण गर्नुपर्दछ
एक राम्रो विधि भनेको कमजोरीहरू भेट्टाउनु हो, तर प्रतिस्पर्धाको कार्यहरूमा त्रुटिहरू पनि। सायद उनीहरूको साइटहरूमा धेरै टुक्रिएका लिंकहरू छन् नक्कल सामग्री वा cannibalization सामना गर्दै छन्? सबै जाँच गर्नुहोस् SEO पक्षहरू र चीजहरू खोज्नुहोस् जुन तपाईं अझ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रमाणिकरणले तपाईंलाई तपाईंको वेबसाइट कमजोर छ भनेर प्रमाणित गर्न अनुमति दिनेछ। यसले तत्वहरूको बारेमा सजग हुन सम्भव बनाउँदछ कि बिल्कुल सुधार गर्न आवश्यक छ। तपाईंको कमिहरू के हो जाँच गर्नुहोस् र प्रमाणित गर्नुहोस् कि यदि प्रतियोगितामा गल्तिहरू छन् कि तपाईंलाई एक फाइदा लिनको लागि अनुमति दिन्छ।
वास्तविक सम्भाव्यता र बजेटमा समायोजन
यदि तपाईं प्रतिस्पर्धाको गहन विश्लेषण पछि नै हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि गतिविधिहरूको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको मूल्याate्कन गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई खोजी परिणामहरूमा अन्य कम्पनीहरूलाई अघि बढाउन अनुमति दिनेछ। वेबसाइटको यूएक्स, नेभिगेसन, कोड सुधार वा गतिमा परिवर्तन ल्याउने, प्रभावकारी लिinking्क सिर्जना गर्दा, तपाईंको लागतले कति खर्च गर्ने अनुमान गर्नुहोस्। कुन वाक्यांश तपाईंको लागि महँगो हुन्छ अनुमान गर्नुहोस् र ती ट्राफिक छनौट गर्नुहोस्, तर उच्च प्रतिस्पर्धा छैन।
तपाइँको सहि रणनीति स्थापना पछि, तपाइँ काम गर्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिले, यी कार्यहरू पछि, खोजी इन्जिन रोबोटहरूको सर्तमा SEO को लागी तपाईंको वेबसाइट अप्टिमाइज गर्नुहोस्। त्यसो भए, स्थिति रणनीति अनुसरण गर्दै, अर्को गतिविधिहरू लागू गर्नुहोस्, तर प्रतिस्पर्धा अनुसन्धान छोड्नुहोस्। यो प्रभावकारी हुन सक्छ एक पटक यो याद गर्नुभयो कि तपाईले आफ्नो स्थिति सुधार गर्न प्रभावकारी गतिविधिहरू गरिरहनु भएको छ।
अन्य मार्केटिंग गतिविधिहरूमा समर्पित SEO ड्यासबोर्ड
समर्पित एसईओ ड्यासबोर्डको साथ, एसईओको सर्तमा प्रतिस्पर्धा अनुसन्धान अन्य मार्केटिंग गतिविधिहरूमा पनि उपयोगी हुन सक्दछ। यदि तपाईं त्यस्ता तत्वहरूलाई परिष्कृत गर्न चाहनुहुन्छ भने, उदाहरणका लागि, उत्पादन वा सेवाहरूका प्रापकहरूको समूहहरू मिलाउन, तपाईं आफ्नो र तपाईंको प्रतिस्पर्धीको गतिविधिहरूको तुलना गर्न सक्नुहुनेछ। अन्य ब्रान्डहरूले कसरी दर्शकहरूलाई सम्बोधन गर्दछन् जाँच गर्नुहोस्, चाहे उनीहरू गाईडहरू बनाउँदछन् र कुन भाषामा उनीहरूले लेख्छन्। उनीहरूको शब्दहरू विशेष व्यक्तिलाई निर्देशित गर्छन्, वा हुनसक्छ तिनीहरू केवल Google रोबोटहरूको लागि सामग्री सिर्जना गर्छन्? त्यस्ता जानकारीमा आधारित, तपाईं उदाहरणको लागि विस्तार वा कम गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको लागि लक्षित श्रोतालाई उत्पादनहरू र सेवाहरू।
तपाइँलाई सशुल्क विज्ञापन अभियानहरू सिर्जना गर्न र सम्भावित ग्राहकलाई आकर्षित गर्न विभिन्न तरिकाहरूमा निर्णय लिन यो सजिलो हुनेछ। हुनसक्छ तपाईंले आफ्नो वेबसाइटमा थप सेक्सनहरू थप्नुहुनेछ, जस्तै FAQ, वा सबैभन्दा उपयोगी सामग्री सिर्जना गर्न सुरू गर्नुहोस्। तिनीहरू सामान्यतया गाईडहरू, समाचार वा जानकारीमूलक हुन सक्छन्।
याद गर्नुहोस् कि समर्पित SEO ड्यासबोर्डको साथ SEO प्रतिस्पर्धा विश्लेषण एक स्रोत हो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जानकारी यसले स्थिति गतिविधिहरूलाई समर्थन गर्दछ, तर त्यो पनि UX, नेभिगेसन, सामग्री निर्माण वा ग्राहकहरूको साथ संचारको भाषाको क्षेत्रमा।